MIENDRIKA JESOSY handray ny haja - Fiangonana Batista Biblika eto Madagasikara
MIENDRIKA JESOSY handray ny haja
Mendrika ny fanajana ambony indrindra Jesosy. Mendrika ny ametrahana azy ho voalohany amin’ireo zavatra rehetra omentsika haja sy toerana […]
Mendrika ny fanajana ambony indrindra Jesosy. Mendrika ny ametrahana azy ho voalohany amin’ireo zavatra rehetra omentsika haja sy toerana eo amin’ny fiainantsika. Teo amintsika malagasy dia nisy hatrany ireo mari-panajana nomena an’ireo olona miendrika hohajaina : ny vodiakoho ho an’ireo ray aman-dreny, ny santabary ho an’ny mpanjaka, sns.
Maneho an’izany fanajana izany ve isika amin’ny fanolorantsika ho azy izay tsara indrindra ? Ny fotoanan’ny fahatanorana no lazaina fa fotoana « tsara indrindra » ho an’ny olona : faratampon’ny hery sy ny fahafahana manao zavatra.
Aleo tsy ny ambinambiny (ambinambim-bola, sisasisam-potoana, sisasisan-kery, sns ) no atolotsika ho an’ny Tompo, fa ny tsara indrindra satria miendrika ny fanajana rehetra Ilay Zanak’Ondry novonoina ho famonjena antsika. Indraindray mantsy (mba tsy ilazako hoe matetika), dia vitaintsika daholo aloha izay mahafinaritra antsika, dia izay vao ny an’ny Tompo raha mbola misy ambiny.
MENDRIKA JESOSY handray ny Faherezana
MIENDRIKA JESOSY handray ny voninahitra